NOAA na-atụ anya oge ifufe na-arụsi ọrụ ike karị na Atlantic | Netwọk Mgbasa Ozi
NOAA na-atụ anya oge ifufe na-arụsi ọrụ ike na Atlantic
Oge oke ifufe na Atlantic ga-arụsi ọrụ ike dịka National Oceanic na Atmospheric Administration nke United States, nke a maara nke ọma dị ka NOAA. Na ngụkọta, ha na-atụ anya na-etolite n'etiti 12 na 17 oké ifufe, nke n'etiti 5 na 8 ga-abụ ajọ ifufe, na n'ime ndị ahụ, 2 gaa na 4 nwere ike bụrụ oke ifufe nke ụdị dị elu.
Ndị ọkachamara n’etiti oge emelitere amụma ha, wee gosi na ohere ọ ga-abụ oge nkịtị ma ọ bụ karịa karịa nkịtị kwesịrị nnukwu: 70%.
Na amụma mbụ ya, NOAA mere atụmatụ na n’agbata oke ikuku nke 10 na 16 nwere ike ịmalite, na ajọ ifufe 4 ruo 8, nke 1 ka 4 ga-emebi. Ya mere, onu ogugu ohuru di elu karie nke oge ndi ozo, n'oge edere 12 na oke ifufe 6, nke ihe dika 3 na-abukari udiri.
Na mgbakwunye, e mere atụmatụ na oge ajọ ifufe a, nke na-agwụ na November 30, bụrụ onye kachasị ọrụ kemgbe 2012. Ma gịnị kpatara oke ikuku na ifufe karịa oke nkịtị?
E nwere ọtụtụ ihe ejirila n'uche maka amụma ha: ihe El Niño, nke na-emebi ugbu a, ahia ikuku na-amalite ịbụ ike ọgwụgwụ na etiti ebe okpomọkụ Atlantic, na mgbakwunye na monsoon N'ebe ọdịda anyanwụ Africa.
N'agbanyeghị nke ahụ, onyeisi ndị otu na-ahụ maka ihu igwe NOAA, bụ Gerry Bell, kwuru na ụkpụrụ nke oke osimiri dị oke mma maka oge iji na-arụ ọrụYa mere, ihe La Laña, nke nwere ike ịpụta n'ọnwa na-abịanụ, agaghị enwe nnukwu mmetụta na oge ajọ ifufe dị ugbu a.
N'oge ahụ, e nweela oké ifufe akpọrọ aha ise, na ajọ ifufe abụọ: Alex na Earl, nke kpatara ọnwụ opekata mpe mmadụ 49 na Mexico.
Nwere ike ịgụ akụkọ NOAA ebe a (na Bekee).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » NOAA na-atụ anya oge ifufe na-arụsi ọrụ ike na Atlantic
3 ịmata ihe banyere Northern Light
4 akụkọ ifo banyere ala ọma jijiji